I-ToutApp: Ukulandela Ukuthengisa, Izifanekiso kanye Nezibalo | Martech Zone
I-ToutApp: Ukulandela Ukuthengisa, Izifanekiso kanye Nezibalo
NgoLwesine, Januwari 3, 2013 NgoMgqibelo, Disemba 12, 2015 Douglas Karr
Enhlanganweni enkulu yokuthengisa, abamele abathengisayo abaphumayo banesimo esingathandeki sokuxhumana nezinqwaba zemikhombandlela kwesinye isikhathi ukuxhumana nalelo themba elilodwa noma amabili azoguquka. Izinhlelo zokumaketha ezintsha ezifana nabaxhasi bethu i-Right On Interactive phatha ukuhola amagoli nokukhulisa ukuxhumana kwenqwaba yabantu, kepha abasebenzi bezentengiso basadinga ukukhiqiza ama-imeyili abo 1: 1 ukuze baxhumane uqobo nemikhombandlela yabo.
bonke iyipulatifomu yokusheshisa yokuthengisa esiza iqembu lakho lokuthengisa ukubhala ama-imeyili ngokushesha, ukulandelela ukuzibandakanya nokuvala amadili amaningi. I-Tout isebenza ngamathuluzi akho akhona kufaka phakathi i-Gmail, i-Outlook, ne-Salesforce.
Okuphakelayo Okubukhoma - Hhayi kuphela ukuthi ungalandelela ukubukwa, ukuchofoza nezimpendulo, ungathatha isinyathelo ngqo kusuka ku-Live feed yakho. Ngokuchofoza okukodwa, shaya ucingo, shutha i-imeyili noma ubuke idatha ye-CRM konke endaweni eyodwa.
Ukulandelela i-imeyili - Thola ukubonakala kwesikhathi sangempela kulokho okwenzekayo ngama-imeyili akho. Yazi lapho othile ebuka, echofoza noma ephendula i-imeyili.
Ukulandelwa Kwewebhusayithi - Thola ukuqonda ngalokho amathemba akho anentshisekelo kukho. Uma ithemba lichofozwa kusixhumanisi esiku-imeyili yakho, uzokwazi kahle lapho bevakashela iwebhusayithi yakho, ikhasi lamanani noma Isikhungo Sosizo ngemuva kwalokho.
Ukulandelela Okunamathiselwe - Nge-Attachment Tracking, awusoze wasala ebumnyameni. Bona ukuthi ngabe ithemba livule okunamathiselwe kwakho, nokuthi babheka maphi amakhasi
Sebenzisa konke ngaphakathi kweklayenti lakho le-imeyili - Ungasebenzisa i-Tout kusuka kuhlelo lwethu lokusebenza olususelwa kuwebhu, uhlelo lwethu lokusebenza lweselula, kusuka ku-CRM yakho noma ngisho nangaphakathi kwe-imeyili Clients Gmail ne-Outlook.
Ihlangana ne-Salesforce namanye ama-CRM - I-Tout ihlangana ngqo ne-Salesforce, Highrise, CapsuleCRM ne-Batchbook, ivumelanisa oxhumana nabo futhi igcina umsebenzi wakho usesikhathini.
Tags: ukuxhumana kwezokuthengisai-imeyili yokuthengisaUkunika Amandla Ukuthengisabonketoutapp
Ukuklama Isicelo Esiphelele Seselula